Kodi 18.0 yekutanga Kuburitswa Musarudzo akatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Kodi 18.0 yekutanga Kuburitswa Musarudzo akatoburitswa
Kwangopfuura vhiki mbiri mushure mekuburitswa kwechishanu uye yekupedzisira beta vhezheni ye Kodi, ikozvino isu tine yekutanga RC (Regedzera Musarudzo) mumaoko edu.
Izvi zvinoreva kuti Kodi vagadziri vava pedyo nekupedzisa kuvaka iyo ichave inotevera vhezheni Kodi 18 Leia, iyo ichaburitswa gore risati rapera.
Sezvaunogona kufungidzira Rakawanda basa rakaitwa pane yazvino vhezheni hombe yeKare. Zvinoenderana neKo blog post, Kodi vagadziri uye vanozvipira vave vachishanda kwemakore maviri pane iyo Kodi 18 Leia kuburitswa.
Munguva iyoyo, toni yekodhi yakabviswa, yakatsiviwa, yakagadziridzwa, uye zvimwe zvakawanda zvitsva zvakawedzerwa.
Kune avo vachiri kuziva nezve Kodi, ndinogona kukuudza kuti ino inzvimbo yemidhiiniti inogona kushandiswa kutamba angangoita ese mafomati evhidhiyo nemavhidhiyo.
NeMedia Center, Kodi zvakare inobvumidza iwe kuti ugone kutamba maCD nemaDVD zvakananga kubva kuDiski faira kana kubva pamufananidzo, uye inotsigira dzinenge dzese dzakakurumbira mafomati e multimedia, inogona kutamba mafaira mukati meZIP neRAR mafaera.
1 Chii chitsva muKodi 18 RC 1
1.1 Itsva DRM
1.2 Chitarisiko chitsva
1.3 Mumhanzi nemavhidhiyo zvinowedzera
Chii chitsva muKodi 18 RC 1
Kodi 18 ndiyo inotevera hukuru hukuru makore maviri mukuvandudza iyo inosanganisira kutsigira kweRetroPlayer mitambo, rutsigiro rweGoogle Mubatsiri, rutsigiro zvirinani rweWindows neUWP, zvirinani zviratidziro zveTv TV, zvirinani kutsigirwa kweWayland, kugadzikana kuri nani uye zvimwe zvakawanda zvinogadziridzwa.
Mazuva ano, zvakajairika kune varidzi vezviri uye vanopa kuti vadzivirire zvirimo ne encryption.
Neshanduro 18, akawedzera kugona kuridza izvo zvemukati nenzira iyo zvayakatarisirwa nehurongwa hwe DRM.
Zvichienderana ne Hardware yakashandiswa uye rezinesi rakabatanidzwa, unogona kuburitsa izvi zvemukati, izvo zvinowanzouya nebasa rekusaina.
Kunyangwe paine atove anoverengeka mawedzero-anowanikwa mune echirongwa repository ayo atove kushandisa chinhu ichi, uye munguva pfupi, izvi zvichaita kuti vanopa zvemukati vape masevhisi avo seyekumiririra wepamutemo.
Kana chiri icho chinongedzo chemushandisi shanduko diki uye kugadzirisa zvakawedzerwa. Zvimwe zvinogona kunge zvisingaonekwe, asi zvinofanirwa kugadzirisa zvese zvinoshandiswa.
Yese huru vhezheni yeRa inounza shanduko kune mushandisi interface Ndosaka vagadziri veganda reKodi vachida kuzvigadzirisa kuti zvienderane. Izvozvi, hatina akawanda makanda anoenderana.
Zvakare, chikamu chekumisikidza chapfuura nekumwe kugadzirisa pamwe. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kwazvo kuti iwe uende kuburikidza nezvikamu zvese zvegadziriro uye wozvigadzirisa pane zvaunofarira.
Kuti upedze, pazasi peiyo interface, pane diki diki tsananguro yezvinoitwa neese kugadzirisa.
Mumhanzi nemavhidhiyo zvinowedzera
Chikamu chemimhanzi chakawana zvakare kuvandudzwa kwakawanda kune avo vane hanya zvakanyanya nezvekuva neraibhurari yemumhanzi yakachena.
Hunhu hweiyo Rarama TV's Kodi uye kurekodha kumberi-kumagumo ndechimwe chezvishoma zvinozivikanwa zviwanikwa, zvinoda ruzivo uye marongero ekugadzirisa.
Kuti ushandise izvi, iwe uchazoda imwe yekuwedzera Hardware, senge USB tuner kana network tuner, seiyo HDHomerun, kuti uwane tambo kana ether chiratidzo chinoshandurwa kuita vhidhiyo kuyerera.
Izvo zvakaitwa nekufamba kwenguva kusimudzira mashandisirwo uye kugadzikana kwechinhu ichi uye kuyedza kuchiita chakanakisa chinotsiva chako chakajairika kunze / ether decoder.
Parizvino, hapana misi chaiyo yeReta 18 Leia. Nekudaro, chinhu chimwe ndechechokwadi: isu tava kusvika musi iwoyo. Kodi vagadziri vanofanirwa kuburitsa yechipiri Regedza Mukwikwidzi munguva pfupi, iyo ichateverwa neshanduro yekupedzisira.
Kana iwe uchida kuyedza Kodi 18 RC1, iwe unofanirwa kushanyira iyo yepamutemo kurodha peji. Kubva ipapo, sarudza yako sisitimu yekushandisa uye wobva wasarudza iyo 'Yekutarisa' tebhu. Apa ndipo paunozoona Kodi 18 RC1 inowanikwa kurodha pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kodi 18.0 yekutanga Kuburitswa Musarudzo akatoburitswa
Docker 18.09 inowedzera kutenderera kwekutsigirwa, SSH kuendesa mberi uye zvimwe
MXGP3: yepamutemo motocross vhidhiyo mutambo waburitswa weLinux